Fantaro ny drafitra fandinihana hazavana Photometric
Rehefa eo amin'ny sehatry ny jiro tontolo iainana ianao ho toy ny mpanamboatra, mpamorona jiro, mpaninjara, na mpandrafitra mari-trano dia matetika mila manondro antontan-taratasy momba ny drafitra fotom-pitrandrahana IES ianao hahalalanao ny tena fivoahan'ny hazavana sy ny hery lumen ho an'ireo jiro tianao hapetraka ao amin'ny famolavolana. Ho an'ny ...
Ny vanim-potoana niomerika dia tena revolisiona teo amin'ny tontolon'ny mpivarotra. Ny fisehoan'ny varotra elektronika dia mila fanovana fomba fiasa amin'ny famolavolana paikady ara-barotra. Amin'ity zava-misy vaovao ity, inona no andraikitry ny magazay ara-batana? Miatrika fanamby mbola tsy nisy toy izany ny sehatry ny varotra nentim-paharazana: ...
Amin'izao fotoana izao, ny tanàna no dingana lehibe miseho ny fiainam-bahoaka. Raha heverintsika fa ny ankamaroan'ny mponina manerantany dia miaina afovoan-tanàna ary mitombo io fironana io dia toa ilaina ny manadihady ny fomba nanovana ireo toerana ireo ary inona ny fanamby atrehin'ny ...